မ သိ တဲ့ သူ မ ရှိ ပါ ဘူး – Hlataw.com
မ သိ တဲ့ သူ မ ရှိ ပါ ဘူး
ကျမတို့မိသားစုနေတာကပဲခူးမြို့နယ်ထဲကကျဉ်ဆုံကြီးရွာမှာပါ..။ကျေးရွာဆိုပေမဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပြီးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘေးမှာလည်းရှိ နေလေတော့အတော်စည်ကားပြီးမြို့လေးတစ်မြို့နဲ့ မခြားလှပါဘူး..။ ရွာမှာဦးတင်ရွှေဒေါ်အေးသန်းဆိုတာမသိတဲ့သူမရှိသလိုသူတို့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမီး တင်တင်သန်းဆိုရင်လည်းမသိတဲ့သူမရှိပါဘူး…။ ဦးတင်ရွှေဒေါ်အေးသန်းဆိုတာကကျမရဲ့မိဘတွေပါ..။အဖေနဲ့အမေကသစ်စက်တစ်လုံးနဲ့ဆယ်ဘီးကုန်တင်ကားတစ်စီးတို့ရှိပြီးရွာရဲ့ရပ်ရေးရွာရေးအလှူဒါနကိစ္စတွေမှာရှေ့ဆုံးက ပါဝင်ခဲ့လို့မသိတဲ့သူမရှိပါဘူး…။ အဲ…သူတို့ရဲ့သမီးကျမတင်တင်သန်းကျတော့မိဘတွေရဲ့အရှိန်အဝါအပြင်ကျမရဲ့ အလှအပတွေကြောင့်မသိတဲ့သူမရှိပါဘူး..။ရွာမှာအလှူအတန်း၊မင်္ဂလာဆောင်တွေဆိုရင် ကျမကိုမရမကလာပြီးခေါ်ကြပါတယ်…။ ပြီးတော့ဧည့်ခံတဲ့နေရာတို့လက်ဖွဲ့လက်ခံတဲ့ စာရင်းခုံတို့မှာကျမရှိနေမှဂုဏ်ရှိတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်…။
အခုကျမပြောချင်တာကကျမရဲ့ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးအကွေ့လေးတစ်ခုပါ..။ဒီတစ်ဆစ်ချိုးကွေ့လေးဟာဘယ်ကစလဲဆိုရင်ကျမရဲ့မိခင်ဒေါ်အေးသန်းကွယ်လွန်သွားတဲ့ အချိန်ကနေစတာပါပဲ…။ အဲဒီအချိန်ကကျမဟာအသက်၁၈နှစ်ထဲဝင်ကာစပဲရှိပါသေးတယ်…။ ကျမတို့နေတာကခြံအကျယ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာပါ..။တစ်ဖက်ကသစ်စက်ရှိပြီး တစ်ဖက်ကကျမတို့မိသားစုရဲ့ နှစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်ရှိပါတယ်…။ သစ်စက်ရဲ့နောက်ဖက်မှာတော့အိမ်လေးနှစ်လုံးရှိပါတယ်..။တစ်လုံးကသစ် စက်ဝိုင်းဆရာ ရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးတစ်လုံးကသစ်စက်စာရေးကြီးရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေဆုံးသွားပြီးတစ်လလောက်ကစပြီးအဖေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမူးနေပါတယ်…။ ရပ်ထဲရွာထဲမှာလှည့်သောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး..။နဂိုထဲက အရက်သောက်တတ်လေ့ရှိတဲ့သစ်စက်ဝိုင်းဆရာဦးအောင်မောင်းနဲ့အတူ သစ်စက်နောက်ဖက်ကတွဲလျက်ရုံးခန်းလိုလုပ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာသောက်တာပါ…။
အဖေအတော်မူးလာတဲ့နေ့တွေဆိုဝိုင်းဆရာဦးအောင်မောင်းကအမြဲပဲတွဲပြီးအိမ်ကို လိုက်ပို့လေ့ရှိပါတယ်..။ အဖေကထမင်းပါတစ်ခါတည်းစားလာသလားမသိပါဘူး…။မူးပြီး ပြန်လာရင်ဘယ်တော့မှထမင်းမစားတော့ပါဘူး…။ တစ်ခါတည်းတန်းအိပ်တော့တာပါဘဲ..။ ပြန်လာရင်လည်းည၁၀နာရီကျော်လောက်မှပြန်လာလေ့ရှိပါတယ်…။ အဖေတစ်ယောက်ထဲပြန်လာရင်တော့ကျမကအဖေ့ဝေယျာဝစ္စတွေကိုထပြီးလုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်…။ အဖေသိပ်မူးပြီးဦးအောင်မောင်းလိုက်ပို့တဲ့နေ့တွေဆိုကျမအခန်းထဲမှာဘဲ နေလိုက်ပါတယ်…။ ထပြီးတော့မကြည့်တော့ပါဘူး..။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင်အဖေအရက်သောက်တာမကြိုက်တာလည်းပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့နဂိုကအရက်မသောက်တတ်တဲ့အဖေ့ကိုဝိုင်းဆရာဦးအောင်မောင်းကဖျက်ဆီးနေတယ်လို့တွက်ဆပြီးဦးအောင်မောင်းမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်တာလဲပါတာပေါ့….. ဦးအောင်မောင်းဆိုတာကအသက်၄၀ကျော်လောက်ရှိပါပြီ..။
အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့ အလုပ်ကြမ်းသမားဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသန်မာထွားကြိုင်းလှပါတယ်..။ကျမမွေးကာစအဖေတို့သစ်စက်စတည်ကတည်းကလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အဖေ့ကိုဦးအောင်မောင်းကဘဲဝိုင်းကူပြီးသစ်စက်လုပ်ငန်းကိုစပြီးလုပ် ကိုင်ခဲ့ကြတာဆိုတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရင်းနှီးမှုအတိုင်းအတာကမသေးလှပါဘူး။ဦးအောင်မောင်းကမုဆိုးဖိုဖြစ်ပြီးသူ့မှာအသက်၂၀ကျော် လောက်ရှိတဲ့စိန်မောင်ဆိုတဲ့ သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်…။စိန်မောင်ကကျမတို့ရဲ့ကားမှာစပယ်ယာလိုက်ပါတယ်…။ နောက်သစ်စက်စာရေးကြီးနံမယ်ကဦးထွန်းအေးလို့ခေါ်ပါတယ်…။ အသက်၅၀ကျော်၆၀နီးပါးလောက်ရှိပြီးသူ့မိန်းမကတော့အသက်၄၀လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်…။ သူတို့မှာ အိမ်ထောင်သည်သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီး စာေ၇းကြီးရဲ့မိန်းမဒေါ်ထွေးကသူ့သမီးရှိရာပဲခူးမှာ လိုက်ပြီးနေပါတယ်..။ တစ်လတစ်ခါလောက်ပဲစာရေးကြီးဆီပြန်လာတတ်ပါတယ်…။
အဲဒီ စာရေးကြီးကလည်းကျမတို့သစ်စက်စတည်ကထဲကလုပ်လာတဲ့သူဆိုတော့အားလုံး လူရင်းတွေချည်းပါပဲတစ်နေ့မှာတော့ ….မနက်စောစောဘဲအဖေနဲ့စာရေးကြီးတို့ဟာသစ်စက်လိုင်စင်ကိစ္စနဲ့ ပဲခူးကိုထွက်သွားကြပါတယ်..။နေ့ချင်းပြန်ဖြစ်ပြီးညနေဆိုပြန်ရောက်လာကြမှာပါ..။ စာရေးကြီးမိန်းမဒေါ်ထွေးကလည်းရောက်နေတော့ကျမလည်းညနေ ထမင်းစားပြီးတာနဲ့မိန်းမချင်းစကားစမြည်ပြောချင်တာနဲ့ဒေါ်ထွေးတို့ အိမ်ဖက်ကိုကူးခဲ့ပါတယ်..။ကျမနေရတာကမိန်းမဖော်ဆိုလို့မရှိတဲ့ ယောက်ျားတွေကြားထဲမှာပါ..။ အိမ်လေးက၁၅ပေပတ်လည်လောက်ပဲရှိပါတယ်..။ အိမ်ပေါ်လှမ်းတက်လိုက်တော့ ဒေါ်ထွေးကိုမတွေ့တာနဲ့ချက်တုန်းပြုတ်တုန်းပဲထင်ပြီးအသံမပေးတော့ဘဲ နောက်ဖေးဖက် မီးဖိုကိုသွားဖို့ဦးတည်ပြီးအတွင်းဖက်ကိုလှမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်..။ “အို………“ ကျမဒိန်းခနဲရင်တွေခုန်ပြီးတုန်လှုပ်ခြောက်ချားသွားပါတယ်..။
ကြည့်ပါအုံး……အဝတ်အစားတွေကင်းမဲ့နေတဲ့ဒေါ်ထွေးကလေးဖက်ကြီးကုန်းပြီးနောက်က ကိုအောင်မောင်းကဟို….ဟို.. ခွေးတွေလုပ်သလိုမျိုးလေ….ဘာလဲ… လိုးတာလား……အဲသလိုမျိုးပေါ့….။ မြင်ကွင်းကစက်ဆုတ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်ကျမကိုတော့ဗြုန်းခနဲ ဖမ်းစားဆွဲဆောင်ထားပါတယ်…။ သူတို့ကကျမရပ်နေတဲ့နေရာကိုခပ်စောင်းစောင်းလေး ကျောပေးထားတာပါ..။ကျမရဲ့ မျက်စေ့ကဒေါ်ထွေးရဲ့ရှေ့ဖင် …အဲ..ကုန်းထားလို့နောက်ကိုရောက်နေတဲ့ဟာထဲကို ကိုအောင်မောင်းဟာကြီးကတဖွတ်ဖွတ်နဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ နေရာကို ချက်ချင်းရောက်သွားပြီးဗြုန်းခနဲမျက်လုံးမလွှဲနိုင်ပါဘူး…။ ကျမတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးတစ်ခါမှမဖြစ် ပေါ်ဖူးတဲ့ပြောမပြတတ်တဲ့ခံစားချက်ဟာကျမရင်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရပါတယ်…။ အဲဒီခဏမှာပဲလူရိပ်လိုလိုမြင်လို့ထင်ရဲ့ဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ ကိုအောင်မောင်းဟာကျမကိုမြင်တွေ့သွားပါတယ်..။
ကျမလည်းချက်ချင်းပဲလှည့်ထွက်ပြီးခြေသံမကြားအောင် နင်းပြီးပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်..။ အဖေနဲ့စာရေးကြီးတို့ကပဲခူးကနေညနေ၃နာရီလောက်ပြန်ပြီးရောက်လာပါတယ်..။ အဖေကတော့ထုံးစံအတိုင်းရေချိုးပြီးအရက်သောက်ဖို့ထွက်သွားပါတယ်..။ ဒီနေ့အဖို့တော့ကျမကသူတို့ကိုသိပ်ပြီးစိတ်မဝင်စားနိုင်ပါဘူး..။နေ့ခင်းကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကိုအောင်မောင်းနဲ့ဒေါ်ထွေးတို့ရဲ့မြင်ကွင်းကကျမမျက်စေ့ထဲကကိုမထွက်ပါဘူး..။ ပြီးတော့လည်းကျမကိုယ်ကျမဘာဖြစ်မှန်းမသိတဲ့ဝေဒနာတစ်ရပ်ကိုကြိတ်မှိတ်ပြီး ခံစားနေရပါတယ်..။ အဖေအရက်သောက်ဖို့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကျမဟာညနေစာကိုမစားချင်စားချင်နဲ့ စားလိုက်ပြီးမိုးချုပ်တာနဲ့ကျမလဲအခန်းထဲဝင်ပြီးအိပ်ယာပေါ်မှာတလူးလူးတလိမ့်လိမ့်နဲ့ နေလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲမသိပါဘူး…။အိမ်ရှေ့ကတက်လာတဲ့ ကိုအောင်မောင်းနဲ့အဖေတို့ရဲ့လျှာလေးအာလေးနဲ့အသံတွေကြားရတော့မှ။
အဖေဒီညအတော်မူးလာလို့ကိုအောင်မောင်းလိုက်ပို့တယ်လို့သိလိုက်ပါတယ်ကိုအောင်မောင်းကအဖေ့ကိုအိပ်ခန်းထဲထိလိုက်ပို့ပြီးမှပြန်သွားလေ့ရှိပါတယ်..။အခုလဲ အဖေ့အိပ်ခန်းဖက်ကအသံဗလံကြားလိုက်ရပြီးခဏအကြာမှာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးအဖေ့ရဲ့ ဟောက်သံထွက်ပေါ်လာပါတယ်…။ ဒီအခိုက်မှာပဲ…. “တင်တင်သန်း…တံခါးဖွင့်ပါအုံး…..“ ကိုအောင်မောင်းရဲ့ခပ်အုပ်အုပ်အသံ..။ကျမလဲအမှတ်တမဲ့မို့ဘာမှမစဉ်းစားတော့ပဲ အိပ်ယာပေါ်ကလူးလှိမ့်ထလိုက်ပြီးအိပ်ခန်းတံခါးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်…။တံခါးပွင့်သွားတာနဲ့ ကိုအောင်မောင်းကကျမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖမ်းပြီးကိုင်လိုက်ပါတယ်..။ “လွှတ်ပါ….ဘာလုပ်တာလဲ…ကျမကိုလွှတ်ပါ….“ ကိုအောင်မောင်းကကျမကိုမလွှတ်တဲ့အပြင်ပွေ့ချီလိုက်ပြီးအိပ်ယာပေါ်ပစ်ချလိုက်ပါတယ်..။ ကျမကထပြီးပြေးရန်ကြံစည်ပေးမဲ့သူ့ဗလကြီးနဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ဖိထားတာကြောင့် မထနိုင်တော့ပါဘူး..။
သူကကျမကိုမီးဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတော့ကျမလဲ အတော်ကြောက်လာမိပါတယ်..။နောက်သူကကျမရဲ့အင်္ကျီကိုဗြုန်းခနဲဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး ကျမကိုငုံ့ကာအတင်းဖက်လိုက်ရာကကျမရဲ့ဘော်လီအင်္ကျီကိုချွတ်ပါတယ်…။ ကျမအော်လည်းကျမကိုဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တော့ပါဘူး…။အဖေကလဲဘယ်လိုမှနိုးမှာ မဟုတ်ပါဘူး..။ကြောက်စိတ်နဲ့ကျမမျက်ရည်တွေတွင်တွင်စီးကျလာပါတော့တယ်…။ ဘော်လီအင်္ကျီကျွတ်သွားတော့ဗလာကျင်းနေတဲ့ရင်သားနှစ်မွှာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယှက်ပြီး ကားထားလိုက်မိတယ်..။ကိုအောင်မောင်းကတော့ကျမကိုစိန်းစိန်းကြည့်ရင်းသူ့ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တော့မဲနက်နေသောအမွှေးတွေနဲ့သူ့လီးမဲမဲကြီးဟာတန်းတန်းမတ်မတ်ကြီးနဲ့ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်..။လီးကြီးအောက်ကဂွေးဥကြီးတွေကလည်းမဲနက်လုံးတစ်နေပြီး တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေပါတယ်…။ ကျမထွက်ပြေးရန်ထထိုင်လိုက်တော့သူကကျမကိုအတင်းတွန်းလှဲပါတယ်…။
ကျမကလဲ အတင်းရုန်းကန်နေလေတော့သူကကုတင်လေးပေါ်တက်လိုက်ပြီးကျမကိုဖက်ပြီး ဖမ်းချုပ်ရာကသူ့ကိုယ်ကြီးနဲ့ဖိထားပြီးကျမရဲ့ပါးနှစ်ဖက်ကိုအတင်းပဲဖိဖိနမ်းပါတယ်..။ “လွှတ်ပါ…..ကျမကိုလွှတ်ပါ…….“ “မလွှတ်ဘူး….နင်နေ့ခင်းကငါနဲ့မထွေးလိုးနေတာကိုတွေ့ပြီးခံချင်နေတယ် မဟုတ်လား…“ စောစောကကြောက်စိတ်ရှက်စိတ်တွေနဲ့လုံးထွေးပြီးကျမမေ့နေတဲ့ကိစ္စကသူပြောလိုက်မှ ကျမပြန်ပြီးသတိရလိုက်မိပါတယ်…။ “နင်ခံချင်နေမှန်းသိလို့ငါကလိုးပေးမလို့…ငြိမ်ငြိမ်နေ…မနေရင်လည်ပင်း ညှစ်ပြီးသတ်ပစ်လိုက်မယ်…..“ တကယ်လုပ်မယ့်ပုံဖြစ်၍ကျမလန့်သွားပါတယ်..။ပြီးတော့လည်းသူနဲ့ဒေါ်ထွေးတို့ကိစ္စက ကျမအသိထဲဝင်လာတော့စိတ်ခံစားချက်ဟာကြောက်တာရှက်တာတစ်ခုတည်း မဟုတ်တော့ပဲတစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်သွားရပါတယ်..။ ပြောပြီးတာနဲ့သူကကျမကိုငုံ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်…။ပြီးတော့ကျမရဲ့အပျိုစင်နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ငုံ့ပြီးဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့တော့တာပါပဲ…ရှင်…။
ဒီလိုစို့လိုက်တော့ကျမဟာတစ်ကိုယ်လုံး ထူပူရှိန်းဖိန်းသွားပြီးသွေးတွေဆူလာတော့တာပါပဲ…။သူကနို့နှစ်လုံးကိုစို့ပေးနေရင်းက ကျမရဲ့ခါးအောက်ပိုင်းကထဘီးကိုခါးပေါ်သို့ဆွဲပြီးလှန်တင်လိုက်ပါတယ်…။ပြီးတော့ ကျမကိုခွပြီးထောင်မတ်နေတဲ့သူ့လီးကြီးကိုကျမအဖုတ်လေးထဲထိုးသွင်းဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်…။ ကျမလည်းရှိသမျှအင်အားဖြင့်ပေါင်နှစ်လုံးကိုအတင်းညှပ်ပြီးလိမ်ထားပါတယ်…။သူက အတင်းပဲကျမပေါင်နှစ်လုံးကိုဆွဲဖြဲတော့အားမတန်ပဲကျမပေါင်တန်တွေလည်းဟသွားပါလေရော…။ဒီတော့ကျမရဲ့စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ ပြဲဟသွားရတော့တာပေါ့…ရှင်…။ပြီးတာနဲ့သူ့လီးကြီးကိုတေ့ပြီးဖိသွင်းချလိုက်ပါတယ်…။ “ဗြစ်…..ဗြစ်….ပလစ်….ဖွတ်….အား…အ…အား…“ နာပြီးကျမအသားတွေဆတ်ခနဲတုန်သွားပါတယ်..။ကျမစောက်ပတ်က ကျဉ်းကျဉ်းလေးဆိုတော့သူ့လီးကြီးကမဝင်ပါဘူး..။တစ်ကြိမ်းလဲမဝင်၊နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လည်းမဝင်ပါဘူး…။
နင့်စောက်ပတ်ကကျဉ်းလဲကျဉ်းခြောက်လဲခြောက်နေတော့လီးမဝင်ဘူး…၊ကိစ္စ မရှိဘူး…စိုလာအောင်ငါလုပ်ပြီးသွင်းမယ်….“ ကိုအောင်မောင်းဟာကျမရဲ့နို့သီးလေးတွေကိုစုပ်လိုက်လျှာနဲ့ယက်လိုက်လုပ်ရင်း စောက်ပတ်ထိပ်ကကျမရဲ့စောက်စေ့လေးကိုသူ့လီးထိပ်ကြီးနဲ့ထိုးပွတ်ကလိပါတယ်…။ ခဏကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတစ်ကိုယ်လုံးမရိုးမရွဖြစ်လာပြီး အသက်ရှူမြန်လာပါတယ်…။အဲဒီအခါမှာကိုအောင်မောင်းဟာသူ့လီးကြီးကို စောက်စေ့လေးကိုထိုးပွတ်ရုံမျှမကပဲကျမရဲ့စောက်ပတ်ဝကိုလည်းတစ်ချက်တစ်ချက် ထိုးပါတယ် ကျမမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်လာပြီးလက်တစ်ဖက်နဲ့မျက်နှာကိုပွတ်လိုက် ခေါင်းကိုကုတ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လာပါတယ်…။အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုအောင်မောင်းဟာကျမရဲ့ စောက်ပတ်ဝမှာသူ့လီးကြီးကိုတေ့ပြီးဖိသွင်းချလိုက်ပါတော့တယ်…။ အား….အား….အီး…… ကျမတစ်ကိုယ်လုံးခါဆင်းသွားပါတယ်…။
သူ့လီးကြီးကတဝက်လောက်ဝင်သွားပါပြီ…။ ကျမလည်းမျက်လုံးအစုံမှိတ်ထားပြီးအံကြိတ်ထားလိုက်မိပါတယ်…။သူကကျမရဲ့နို့ကို ဆွဲလိုက်စို့လိုက်လုပ်နေပြီးကျမကတော့အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးနေပါတယ်..။သူကထပ်ပြီးဆောင့်ချလိုက်တော့လီးက တဆုံးဝင်သွားပါရော…..။ အား…….အမလေး…….ဟီး…..ကျွတ်..ကျွတ်….ကျမမျက်လုံးအစုံမှိတ်ထားရင်းပါးစပ်မှငြီးတွားနေမိတယ်..။လီးကိုတဆုံးသွင်းထားပြီး နို့သီးတွေကိုပွတ်ကလိပေးနေပြန်တော့အောက်ကကျမမှာတကြွကြွတရွရွ ဖြစ်လာရတယ်…။ခဏနေတော့မှသူ့လီးကြီးကိုအသာအယာပဲဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတအားနဲ့ ဖိဆောင့်ချလိုက်ပြန်ရာ….“အမေ့…“ ဟုအော်ပြီးသူ့ခါးကြီးကိုကျမ တအားဖက်ထားလိုက်မိပါတယ်…။ အဲဒီနောက်တော့သူကကျမပါးလေးကိုနမ်းလိုက်၊လီးကိုတဝက်လောက်နဲ့အသာအယာ ညှောင့်သွင်းလိုက်လုပ်ပေးနေရာအတော်လေးခံလို့ကောင်းလာ၍ကျမဟာအထဲမှ ချွဲကျိသောအရည်များအတော်လေးထွက်လာပါတယ်…။
အဲဒီအခါကျမှသူကလီးကြီးကိုတဆုံးနီးပါးထုတ်ပြီးဆောင့်ဆောင့်လိုပါတော့တယ်…။ ကျမဟာဦးအောင်မောင်းကိုအတော်မုန်းတီးသွားပါတယ်…။ဒါပေမယ့်ကျမရဲ့ ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကတော့ကျမမုန်းတာကိုငြင်းဆန်သည့်အလား ကော့ကော့ပေးနေကြပါတယ်…။ တဖြေးဖြေးခံလို့ကောင်းသထက်ကောင်းလာတော့ကျမ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်ခုကသူ့လီးကြီးကိုညှပ်ညှပ်ဆွဲညှစ်ပေးနေမိတယ်…။သူက တအားတအားဖိဖိပြီးဆောင့်လိုက်တဲ့အခါကျမဟာကျမရဲ့ဖင်ကားကားကြီးတွေကို ကြွကြွပေးလိုက်ရပြီးသူ့ပခုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အတင်းဖက်ထားမိပါတယ်…။ သူ့ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေဟာတစတစပြင်းထန်လာပြီးကျမကလည်းတဖြေးဖြေးနဲ့ အားမလိုအားမရဖြစ်လာရတာကြောင့်စောက်ပတ်မှာရွသထက်ရွလာပြီးကျမဟာ အငြိမ်မနေနိုင်တော့ပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်…။ ကျမအသက်ရှူသံတွေပြင်းသထက်ပြင်းလာရပြီးကျမရဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုလည်းသူ့ရဲ့လီးကြီး အစွမ်းကုန်ဝင်နိုင်အောင်။
ကားသထက်ကားပေးရင်းသူ့ခါးကြီးကိုတအားကြုံးဖက်ထားလိုက်မိပါတယ်..။ ကျမမှာအထွတ်အထိပ်ရောက်ခါနီးပြီးဖြစ်၍အရှက်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ပဲသူ့လီးကြီးကို ကျမရဲ့စောက်ပတ်အထဲကအသားတွေနဲ့အတင်းညှပ်ဆွဲပေးရင်းကျမဟာတစ်ကိုယ်လုံး တောင့်ခနဲဖြစ်ရာကခါဆင်းသွားပြီးပြောမပြတတ်အောင်အရသာတွေကောင်းသွားခိုက်မှာ သူ့လီးကြီးထိပ်ကအရည်တွေဟာလည်းတပြွတ်ပြွတ်ပန်းဝင်လာပါတယ်…။ ဦးအောင်မောင်းဟာကျမကိုအတင်းကြုံးဖက်လိုက်ပြီးမှိန်းနေပါတယ်…။ခဏနေတော့မှ ကျမရဲ့ပါးနှစ်ဖက်ကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်နမ်းပြီးသူ့လီးကိုဆွဲထုတ်ကာ ပုဆိုးဝတ်လိုက်ပါတယ်…။ ကျမကတော့ထမီလေးတစ်ထည်ပဲခါးမှာလုံးနေတဲ့ကိုယ်တုံးလုံးကြီးကိုမလှုပ်နိုင်တော့ပဲ ပက်လက်လေးပေါ့…။ သူကကုတင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီးကျမရဲ့အမွှေးနုနုလေးတွေစိမ်းနေတဲ့စောက်ပတ်ကို သူ့လက်ဖဝါးနဲ့အသာရိုက်လိုက်ပြီး….. “နင့်ကိုတရွာလုံးကယောက်ျားတွေကလိုးချင်နေကြတာ…။
အခုငါအရင်ဆုံးလိုးလိုက်ရတာ ဟန်ကျတာပဲ…။ နောက်ငါလာလာလိုးပေးမယ်… သိလား….“ ဆိုပြီးကျမအခန်းထဲကထွက်သွားပါတော့တယ်နောက်တစ်နေ့ကစပြီးဦးအောင်မောင်းဟာအိမ်ကိုမလာတော့ပါဘူး..။အဖေကလည်း တွဲခေါ်ရလောက်အောင်မမူးတော့ဦးအောင်မောင်းကလိုက်ပို့စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့..။ ကျမကတော့ဦးအောင်မောင်းလာမှာကြောက်နေပါတယ်..။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမအဖုတ်လေးတစ်ခုလုံးဟာယောင်ကိုင်းပြီးအထိမခံနိုင်လို့ပါ…။ဆီးသွားရင်လည်း တအားစပ်တာပဲ…။မကြာခဏရေကိုင်ပေးရပါတယ်…။နောက်ပြီးပါရာစီတမောနဲ့ ကီးမို့ကိုလည်းသောက်ရပါတယ်…။ ဒါကြောင့်ဦးအောင်မောင်းလာမှာကျမကကြောက်နေတာပါ…။သူကလည်းလူကြီးဆိုတော့ ကျမဒီလိုဖြစ်နေမှာကိုသိနေလို့မလာတာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့..။ဒါပေမယ့်အဲဒီရက်တွေမှာ ညဖက်ဆိုအရက်သောက်ရင်းစကားပြောနေတဲ့ဦးအောင်မောင်းရဲ့အသံကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်နဲ့ကျမအိမ်ကနေကြားနေရပါတယ်…။
အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ ကျမစိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးခံချင်သလိုလိုဘာလိုလိုစိတ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်…။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူကြီးမို့ဒီလိုတမင်အသံပေးနေတာလားမသိပါဘူး…ရှင်….။ အဲဒီလိုနဲ့သုံးရက်လောက်နေတော့ကျမရဲ့ပစ္စည်းလေးဟာ နဂိုအတိုင်းပြန်ပြီးကောင်းသွားပါတယ်…။အဲဒီနေ့မှာပဲစာရေးကြီးရဲ့မိန်းမဒေါ်ထွေးဟာ ပြန်မလို့ကျမကိုလာပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်…။ဒီတော့ဒေါ်ထွေးရှိလို့ကျမဆီဦးအောင်မောင်း မလာတာပဲဆိုပြီးစိတ်ထဲကဒေါ်ထွေးကိုမနာလိုသလိုတောင်ဖြစ်မိပါတယ်…။အမှန်တော့ အဲဒီရက်တွေကဦးအောင်မောင်းလာမှာကျမကြောက်မိတာပါ…။ဒါကိုလျစ်လျူရှုပြီး ဒေါ်ထွေးကိုမုန်းမိပါတယ်…။ အဲ….လေးရက်မြောက်နေ့မှာတော့ကျမသူ့ကိုမျှော်မိတဲ့အထိပါပဲ….။ညကျရင် သူ့အသံကြားတော့အိပ်ယာပေါ်ပက်လက်လှန်ပြီးသူ့အသံနားထောင်ရင်း သူ့ကိုရုပ်လုံးဖော်ကာကျမဟာလေးကိုပွတ်ပေးနေမိတဲ့အထိဦးအောင်မောင်းဟာ ကျမအပေါ်စိုးမိုးနေပါတယ်…..။
ဒါပေမယ့်အဖေပြန်လာတော့သူမပါလာပါဘူး…။ကျမစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ အိပ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်…။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကျမဟာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာချလိုက်ပါတယ်…။အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့သူမလာရင်ကျမကပဲသူရှိရာကို သွားဖို့ပါပဲ…။ တစ်နေ့လုံးကျမသစ်စက်ဖက်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးအခြေအနေကိုအကဲခတ်နေမိပါတယ်..။ မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာတော့အဖေနဲ့စာရေးကြီးတို့ဟာခပ်သုတ်သုတ် ထွက်သွားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်…။သစ်ခွဲတဲ့စက်သံလည်းတိတ်သွားပါတယ်…။ ကျမလည်းခပ်သုတ်သုတ်ပဲမျက်နှာလေးကိုကမန်းကတန်းပြင်၊ခေါင်းဖီးပြီးတော့ ဝတ်ထားတဲ့ဘလောက်စ်အင်္ကျီကိုကျယ်သီးတွေဖြုတ်လိုက်ပြီးအထဲကဘော်လီအင်္ကျီကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီးဘလောက်စ်တစ်ထပ်တည်းနဲ့သစ်စက်နောက်ဖက်ကိုခပ်သုတ်သုတ် ထွက်လာခဲ့ပါတယ်…။ စပြီးအဲဒီကိုသွားတော့မယ်ဆိုပြီးပြင်ဆင်ကထဲကကျမရဲ့စောက်ပတ်ဟာတင်းလာပြီး အရည်လေးတွေစိမ့်ထွက်နေပါပြီ…။
ဒါဟာခံဖူးထားတဲ့မိန်းမတိုင်းခံရတော့မယ်ဆိုတာ သိရင်ဖြစ်နေကျလို့ထင်ပါတယ်..။ကျမဦးအောင်မောင်းရဲ့အိမ်လေးထဲကိုလှမ်းပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့ဦးအောင်မောင်းနဲ့ပက်ပင်းတိုးပါတော့တယ်..။ဟင်……တင်တင်သန်း… ပြောလဲပြော၊သူကကျမဆီကိုဖြတ်ခနဲရောက်လာပြီးဖက်လိုက်ရာကနမ်းတော့တာပါပဲ…။ ပြီးတာနဲ့အတွင်းဖက်မှာရှိတဲ့အခန်းထဲကိုနမ်းရင်းနဲ့ဆွဲခေါ်သွားပြီးအခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာခင်းထားတဲ့အိပ်ယာပေါ်ကိုကျမကိုဆွဲပြီးထိုင်လိုက်တော့ရာကျမလည်း သူ့မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲတစ်ခါတည်းအိပ်ယာထဲကိုပက်လက်လှန်လှဲချလိုက်ရုံသာမက ထဘီလေးကိုပါတစ်ခါထဲခါးပေါ်လှန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဦးအောင်မောင်းဟာကျမဘေးမှာလက်တစ်ဖက်ထောက်ပြီးလှဲလိုက်ရာက ကျန်လက်တစ်ဖက်ကိုကျမရဲ့နို့တစ်လုံးအားအင်္ကျီပေါ်ကနေအုပ်ပြီးကိုင်ညှစ်လိုက်ပါတယ်..။ ကျမသူ့မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲမျက်နှာကိုတစ်ဖက်လွှဲထားရင်းကကျမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဟာ။
ဘလောက်စ်အင်္ကျီလေးရဲ့ရှေ့ဖက်မှာရှိတဲ့နှိပ်စေ့ကျယ်သီးလေးတွေကိုဖြုတ်ပြီးအင်္ကျီစ နှစ်စကိုရင်ဘတ်ပေါ်ကနေတဖက်တချက်ဆီသို့ဆွဲဖယ်ပစ်လိုက်ပါတယ်…။ ဒီအချိန်မှာပဲဦးအောင်မောင်းဟာသူ့ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်…။ဝင်းခနဲပေါ်လာတဲ့ ရင်သားနှစ်မွှာကိုတစ်လုံးကိုစို့တစ်လုံးကိုကိုင်ရင်းနဲ့ဦးအောင်မောင်းဟာကျမရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကို ခွပြီးတက်လာပါတယ်…။ ပြီးတော့စောက်ပတ်ဝမှာလီးထိပ်ကြီးကိုတေ့ပြီးဖိသွင်းလိုက်တာကျမအထဲမှာ စိုရွှဲနေပြီဖြစ်တဲ့အရည်တွေကြောင့်လီးကြီးဟာလျှောခနဲတဆုံးဝင်သွားပါတော့တယ်…။ အဲဒီနောက်မှာဦးအောင်မောင်းကနို့စို့ရင်းဖင်ကြွပြီးဆောင့်ဆောင့်လိုးပါတယ်…။ကျမဖြင့် ဆာနေတုန်းစားရလို့လားမသိဘူး..ကောင်းလိုက်တာရှင်…။ဖင်ကြီးတွေကြွကြွပြီး ကော့ပေးရင်းမျက်လုံးတွေကိုတောင်မဖွင့်ချင်တော့ပါဘူး…။ ဦးအောင်မောင်းလည်းနို့စို့ရင်းဆောင့်ရတာအားမရတော့ဟန်နဲ့ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး အားရပါးရလိုးပါတော့တယ်…ရှင်…။
အင့်..အင့်….ဗြစ်…ဒုတ်…..အ….အီး……အမေ့……အောင်မောင်းရေ……အောင်မောင်း……ဟာ……ဖလွတ်……ကျွတ်…..ဟင်း……သစ်စက်ထဲကနေလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အဖေ့အသံပါ…။ကျမဟာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားရပါတယ်..။ ဦးအောင်မောင်းကသူ့လီးကြီးကိုဖလွတ်ခနဲဆွဲချွတ်လိုက်တော့ကျမလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ကျွတ်ဆိုပြီးစုပ်သပ်လိုက်ရာကသက်ပြင်းတစ်ချက်ဟင်းခနဲ ချလိုက်ပါတယ်…။ “ဒီမှာပဲ…..စောင့်နေ..ငါအခုပြန်လာခဲ့မယ်…..“ ကျမခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်…။ဦးအောင်မောင်းကပုဆိုးကောက်ဝတ်လိုက်ပြီး ထွက်သွားပါတော့တယ်…။ကျမလည်းစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ခါးထိလှန်တင်ထားတဲ့ ထဘီလေးကိုတောင်ပြန်ပြီးမဖုံးမိပါဘူး..။ကျမအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဟာဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ ဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်နေတာပေါ့….။ ခဏကြာတဲ့အထိဦးအောင်မောင်းပြန်မလာသေးတာနဲ့ကျမလည်းမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး အသာမှိန်းနေလိုက်ပါတယ်…။
ဒီလိုမှိန်းပြီးတအောင့်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အနားကို လူတစ်ယောက်ရောက်လာတာသိလိုက်ရပါတယ်…။ဦးအောင်မောင်းပြန်ရောက်လာပြီလို့ သိလိုက်ပါတယ်…။ကျမလည်းမျက်လုံးပြန်မဖွင့်ပဲအသာလေးငြိမ်နေလိုက်မိတယ်…။သူက ကျမရဲ့ဒူးနှစ်လုံးကိုဆွဲပြီးထောင်ကာပေါင်ကားလိုက်ပါတယ်…။အင်း….ဒီတစ်ခါတော့ ဦးအောင်မောင်းကတယ်ပြီးညင်သာလှပါလားလို့တွေးမိပါတယ်…။ပြီးတာနဲ့ကျမရဲ့ နို့နှစ်လုံးကိုလှမ်းဆွဲပြိးလီးကိုစောက်ပတ်ထဲဆောင့်သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်…။ အား….အား…..ဟင်…….နင်….နင်…စောက်ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့လီးကဦးအောင်မောင်းလီးလောက်စောက်ခေါင်းထဲမှာ ကြပ်မနေပဲအရှည်ကတော့ပိုရှည်ပုံရပြီးလီးတဆုံးဝင်သွားတာနဲ့ကျမရင်ခေါင်းထဲအထိ ရောက်သွားသလိုခံစားရပါတယ်…။လီးစသွင်းထဲကလီးနဲ့စောက်ပတ်ထိတွေ့မှုကို အာရုံစိုက်နေတဲ့ကျမဟာဦးအောင်မောင်းမဟုတ်ဖူးဆိုတာချက်ချင်းသိလိုက်တာနဲ့မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်…။
ဦးအောင်မောင်းရဲ့သားစိန်မောင်…..သူ့လီးကကျမစောက်ခေါင်းထဲ တဆုံးဝင်နေပြီ…။နင်…..နင်…ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ…စိန်မောင်…ငါအော်လိုက်ရမလား……အော်ချင်အော်လေ….နင်ကငါတို့အိပ်ယာထဲရောက်နေတာပဲ….ပြီးတော့အဖေက နင့်ကိုငါလိုးတာသိသွားမှာပေါ့…အဖေတင်မဟုတ်ဘူး…တစ်ရွာလုံးသိသွားမှာပေါ့…..နင်….နင်…..ငါ့ကို……ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါ…တင်တင်သန်းရာ….အဖေတို့ဗြုန်းခနဲပြန်မလာသေးပါဘူး…ငါကညထဲက ကားဝင်လာတာ…၊နင်နဲ့ငါ့အဖေနဲ့ကိုစောစောထဲကငါချောင်းကြည့်နေတာ…၊အရင်ထဲက နင့်ကိုငါကလိုးချင်နေတာ…နင်ခံနေတာလည်းမြင်လိုက်ရရော ငါမနေနိုင်တော့လို့ပါဟာ….ခဏလေးနော်…..“ စိန်မောင်ကစကားအရှည်ကြီးကိုလည်းအဆက်မပြတ်ပြောရင်းကကျမရဲ့နို့နှစ်လုံးကိုလည်း ဆွဲကိုင်ကာအဆက်မပြတ်လိုးဆောင့်ပါတော့တယ်…။ကျမလည်းမထူးတော့တဲ့အဆုံးမို့ မျက်လုံးနှစ်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီးနေလိုက်ပါတယ်..။
ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူ တမူထူးခြားတဲ့အရသာကိုကျမခံစားထိတွေ့နေရပါတယ်..။တဖြေးဖြေးသူ့ဆောင့်ချက်တွေ ပြင်းထန်လာသလိုကျမဟာလည်းကာမအရသာတွေတက်သထက် တက်လာရပါတော့တယ်….။ ဒုတ်…ဒုတ်….အ..အု….အ….ဟင့်..ဟင့်…..အင်း…..ဟင်း…… ကျမရဲ့တဟင်းဟင်းနဲ့ညီးသံလေးတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲစိန်မောင်ရဲ့ လီးထိပ်ကနေအရည်တွေပန်းထွက်လာပြီးကျမကိုငုံ့ဖက်လိုက်ရာကကျမရဲ့ပါးနှစ်ဖက်ကို အတင်းနမ်းတော့တာပါပဲရှင်….။ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်…။ “တင်တင်သန်း…နင်ကိုငါခုလိုပြန်လာတိုင်းလိုးပါရစေဟာ….ဘယ်သူမှမသိစေရပါဘူး…..“ ကျမသူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောမိပါဘူး…။ဒါပေမယ့်ကျမမှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးနှစ်လုံးကိုဖွင့်ပြီး သူ့ကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်..။ကျမရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကတော့ ပြုံးယောက်သန်းနေမလားတော့မသိပါဘူး…။ စိန်မောင်ကျမကိုယ်ပေါ်မှာမှောက်ပြီးအမောဖြေနေတုန်းအမောပြေမယ်တောင် မထင်သေးပါဘူး…။
သစ်စက်ဖက်ကစကားပြောသံတွေကြားတာနဲ့စိန်မောင်ဟာလူးလဲထပြီး စောက်ပတ်ထဲကခပ်ပျော့ပျော့ဖြစ်နေတဲ့လီးကိုဆွဲထုတ်ပြီးအိမ်နောက်ဖေးဖက်ကနေ ဆင်းပြေးတော့တာပါဘဲ….။ ကျမမှာသာဟတ်ကော့ကြီးဖြစ်ပြီးကျန်နေခဲ့ရတာပါ..။စိန်မောင့်လီးဆွဲထုတ်သွားတာနဲ့ အထဲကအရည်တွေအန်ထွက်ပြီးကျလာပါတယ်…။ကျမလည်းခါးပေါ်က ထဘီအနားလေးကိုစမ်းလိုက်ပြီးစောက်ပတ်ကိုအုပ်ပြီးသုတ်လိုက်ပါတယ်…။နောက် ပေါင်ခြံတွေနဲ့ဖင်ကြားထဲကိုပါကြွပြီးသုတ်လိုက်ပါတယ်…။ ကျမရဲ့နားကတော့သစ်စက်ဖက်ကိုစွင့်ထားပါတယ်…။စောစောကသစ်စက်ဖက်က စကားပြောသံတွေဟာတဖြေးဖြေးခြံအပြင်ဖက်ဝေးဝေးသွားပြီး အသံပျောက်သွားပါတယ်…။ဒီအချိန်မှာပဲလူတစ်ယောက်အိမ်ပေါ်တက်လာပါတယ်…။ ကျမလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဦးအောင်မောင်းပါ…။အနားရောက်တာနဲ့သူ့ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တော့ဘယ်အချိန်ထဲကတောင်နေမှန်းမသိတဲ့လီးကြီးကတန်းမတ်လို့ပါ…။
ကဲ…တင်တင်သန်း…ငါအချိန်မရဘူး….လေးဖက်ကုန်းလိုက်….ကျမလည်းကမန်းကတန်းထပြီးလေးဖက်ကုန်းပေးလိုက်တယ်..ဆိုရင်ပဲ ဦးအောင်မောင်းဟာကျမရဲ့နောက်မှာဒူးထောက်လိုက်ပြီးနောက်ကိုစူထွက်နေတဲ့ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခုကြားမှာသူ့လီးကြီးကိုတေ့ပြီးကျမရဲ့ခါးသေးသေးလေးကို ကိုင်ကာဆောင့်သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်…။ ဒုတ်…..အား…..အား….ဖြေးဖြေး….ရှင့်….အိ….အီး……အဟင့်…. ဆောင့်သွင်းလိုက်တဲ့လီးကြောင့်ကျမရဲ့မျက်နှာလေးဟာဆတ်ခနဲမော့သွားရပါတယ်…။ ပြီးတာနဲ့လီးတဆုံးဝင်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးဦးအောင်မောင်းဟာဆက်တိုက်ကြီး ဆောင့်လိုးတော့တာပါဘဲကျမလည်းစောစောကစိန်မောင်နဲ့တက်ခဲ့ရတဲ့ကာမအရှိန်တွေဟာချက်ချင်းဟုန်းခနဲ ပြန်ထလာပြီးရှေ့ထောက်ထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုကျားကန်သလို အတင်းထောက်လိုက်ရာကကျမရဲ့ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးကိုလည်းခါးလေးခွက်ပြီး ကော့ထောင်လိုက်ရာက။
သူ့လီးဆောင့်ဆောင့်ဝင်လာမဲ့လမ်းကိုနောက်ပြန်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်ပေးနေမိပါတယ်…။ ဦးအောင်မောင်းကလည်းရှေ့ကကျမနို့နှစ်လုံးကိုကုန်းကုန်းပြီးဆွဲကာဖျစ်ညှစ်လိုက်၊ တင်သားဖွေးဖွေးကြီးတွေကိုဆုပ်လိုက်ညှစ်လိုက်လုပ်ရင်းအဆက်မပြတ် ဆောင့်လိုးနေလိုက်တာကျမဖြင့်တစ်ကိုယ်လုံးကိုယိမ်းထိုးနေရပါတယ်..။အား….အ…..အ..ဟင်း….ဦးလေး……ဆောင့်….ဆောင့် ပေး…..တ..တအားဆောင့်….အင့်….အင့်……“ ကျမဆောက်တည်ရာမရလောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဦးအောင်မောင်းဟာသူ့လီးကို ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကနေဒစ်ဖျားပေါ်တဲ့အထိဆွဲဆွဲထုတ်ပြီးလေးငါးချက်လောက် အံကြိတ်ဆောင့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့သုတ်ရည်တွေဟာပြွတ်ခနဲပြွတ်ခနဲပန်းဝင်ကာ သားအိမ်ကိုလာလာထိတဲ့အချိန်မှာပဲကျမဟာပြောမပြတတ်အောင်ကောင်းတဲ့အရသာကို ခံစားလိုက်ရတော့တာပါပဲ….ရှင်…။ ကျမတို့ရွာမှာဆိုတာကရေချိုးခန်းရယ်လို့အိမ်ပေါ်မှာမရှိပါဘူး..။
အိမ်ဘေး..အိမ်နောက် စသဖြင့်အဆင်ပြေတဲ့နေရာတွေမှာပဲရေစည်တွေရာဝင်အိုးစဉ့်အိုးကြီးတွေထားပြီး သုံးလေ့ရှိပါတယ်…။ ကျမတို့အိမ်မှာလည်းနောက်ဖေးမီးဖိုချောင်ရဲ့ဘေးဖက်လောက်မှာရေစည်တစ်လုံးနဲ့ ရာဝင်အိုးငါးလုံးရှိပါတယ်…။အဲဒီမှာပဲကျမတို့ရေချိုးကြရပါတယ်…။ တစ်နေ့ကျမေ၇ချိုးနေတုန်းမလှမ်းမကမ်းကခြုံပုတ်တစ်ခုဘေးမှာလူရိပ်တွေ့တာကြောင့် မသိမသာအကဲခတ်လိုက်တော့စာရေးကြီးဦးထွန်းအေးပါ…။ခြံထဲမှာအသားဖြူတာဆိုလို့ ကျမနဲ့စာရေးကြီးနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်…။ဒါကြောင့်စာရေးကြီးမှန်းကျမကတစ်ခါထဲ သိလိုက်ရတာပါ..။စာရေးကြီးကကျမရေချိုးနေတာကိုချောင်းကြည့်နေတာပါ…။ အချိန်ကလည်းနေဝင်ဖြိုးဖျလေးဆိုတော့သူ့အတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့…။ကျမလဲ ချောင်းကြည့်နေတဲ့သူရှိမှန်းလဲသိရောရင်လျားထားတဲ့ထမီကိုခါးထိလျှောပြီး နို့ကြီးနှစ်လုံးကြားကိုချေးတွန်းတာတို့ထမီကိုပေါင်ရင်းထိဆွဲလှန်တင်ပြီးပေါင်ခြံကိုချေးတွန်း ဆပ်ပြာတိုက်တာမျိုးတို့လုပ်ပစ်လိုက်တာပေါ့…။
ကျမရေချိုးနေတဲ့နေရာက သစ်ပင်ခြုံနွယ်တွေကွယ်နေလို့တခြားကလှမ်းပြီးမမြင်နိုင်ပါဘူး..။တမင်လာချောင်းမှ မြင်ရမှာပါ..။ ကျမကိုချောင်းနေတဲ့စာရေးကြီးတော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး..။သူ့ကိုဖော်ပြလှန်ပြရင်း ကျမရဲ့စိတ်တွေတောင်ခပ်ထထဖြစ်လာရပါတယ်…။ ရေချိုးပြီးကျမညစာထမင်းစားပြီးတာနဲ့ညနေကချောင်းထားတဲ့စာရေးကြီး ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကိုသိချင်တာရယ်…၊စာရေးကြီးကိုထပ်ပြီး ဒုက္ခပေးချင်တာရယ်ကြောင့်ကျမမီးဖိုချောင်ဘေးပေါက်ကနေပဲဆင်းပြီး စာရေးကြီးတို့အိမ်ဖက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအဖေနဲ့ဦးအောင်မောင်းတို့ကရွာလယ်ကသူတို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အရက်သောက်ဖို့ခေါ်တာကြောင့်ပါသွားကြပါပြီ…။စိန်မောင်ကလည်း ကားပြန်ထွက်သွားပြီ…။အဖေတို့ကလည်းည၁၀နာရီထက်စောပြီးပြန်မလာနိုင်ပါဘူး…။ ဒါနဲ့ကျမစာရေးကြီးရဲ့အိမ်ပေါ်ကိုခပ်တည်တည်ပဲလှမ်းတက်လိုက်ပါတယ်..။
ပြီးတော့ အိမ်ထဲကိုပါလှမ်းဝင်လိုက်တော့အတွင်းဖက်ကနေထွက်လာတဲ့စာရေးကြီးဦးထွန်းအေးနဲ့ ပက်ပင်းတိုးပါလေရော….။တင်တင်ပါလား….လာ…ထိုင်လေ….ဦးထွန်းအေးကဖျာအသေးတစ်ချပ်ကိုခင်းပေးတာနဲ့ကျမလည်းပုဆစ်တုတ်ပြီး ထိုင်လိုက်ပါတယ်…။သူကလည်းကျမနဲ့လက်တစ်ကမ်းမှာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်…။ဘာအကြောင်းထူးရှိလို့လဲ….တင်တင်….တစ်ခါမှမလာစဖူး….. ကျမရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးကိုစူးစူးဝါးဝါးသိမ်းကြုံးကြည့်ရင်းမေးလိုက်ပါတယ်…။ညနေကဘဘကြီးကျမရေချိုးနေတာဘာလို့ချောင်းကြည့်နေတာလဲ….ကျမကမျက်နှာတည်တည်၊လေသံမာမာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်….။ဟို…..ဘကြီး…မကြည့်…ဟို..ဟို……….ဘကြီးတော်တော်ကြည့်ချင်နေလား….ကျမဟာတွေကို…..ဟို…လေ………ဘကြီး…… ဦးထွန်းအေးဟာရှက်လဲရှက်လန့်လဲလန့်ပုံနဲ့အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြစ်နေပါတယ်…။ကဲ…ဒီလောက်တောင်ဘကြီးကြည့်ချင်နေလဲ….ကြည့်ရမယ်။
ကျမကထိုင်ရာကထပြီးအိမ်တံခါးကိုသွားပြီးဆွဲပိတ်လိုက်ပါတယ်..။ပြီးတာနဲ့ကျမ တစ်ထပ်တည်းဝတ်လာတဲ့အင်္ကျီလေးကိုကျယ်သီးတွေဖြုတ်ပြီးချွတ်ပစ်လိုက်ရာ နို့အုံထွားထွားကြီးနှစ်လုံးကလှုပ်ရမ်းပြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်..။အဘိုးကြီးဖျာပေါ် ဖင်ချထိုင်နေရာကနေကျမကိုမျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်ပြီးဆောင့်ကြောင့် ပြင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်..။ နောက်ကျမကခါးမှာဝတ်ထားတဲ့ထဘီကိုကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ကျမရဲ့ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဦးထွန်းအေးဟာဝုန်းခနဲ မတ်တတ်ထရပ်လိုက်ပါတယ်…။ဘကြီး…အဲဒီမှာပဲနေနော်…ကျမနားမလာနဲ့…မဟုတ်ပါဘူးတင်တင်ရာ….ငါလေနင့်ကိုသိပ်ပြီးလုပ်ချင်နေတာ…တစ်ခါတော့ လုပ်ပါရစေနော်…..ကျမပြုံးလိုက်ပါတယ်..။ကျမမုန်းတဲ့ဒေါ်ထွေးရဲ့ယောက်ျားကကျမကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီး ကျမအပေါ်မှာတန်းတန်းစွဲနေပြီလေ…ဒေါ်ထွေးကဦးအောင်မောင်းနဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့် ဒေါ်ထွေးကိုမုန်းတာပါ….။
ဒါတော့မဖြစ်ဘူး…ဒီလောက်ကြည့်ရရင်တော်ရောပေါ့…ကျမကခြေဖျားမှာပုံကျနေတဲ့ထဘီကိုဆွဲတင်ပြီးဝတ်လိုက်ပါတယ်..။ဒီမှာကြည့်ပါအုံး…တင်တင်…ငါမနေနိုင်တော့လို့ပါ…ဦးထွန်းအေးကသူ့ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပါတယ်..။လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ကျမတစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်းခနဲဖြစ်သွားရပါတယ်..။နဲနဲနောနောလီးကြီးမဟုတ်ပါဘူး..။စိန်မောင်နဲ့ ဦးအောင်မောင်းတို့လီးတွေထက်သိသိသာသာကြီးကိုကြီးလည်းကြီးရှည်လဲရှည်တယ်..။ ဒါပေမယ့်လီးကတန်းမတ်ပြီးမနေဘဲ၄၅ဒီဂရီလောက်အောက်ကိုငိုက်နေတယ်..။ဒါတော့မဖြစ်ဘူး…ဘကြီး…ကဲကျမပြန်ပါရစေတော့…..ကျမလဲအင်္ကျီကိုကောက်ယူပြီးစွပ်လိုက်ပါတယ်..။အို…..ဘကြီး…ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ…လွှတ်ပါဆို…..ကဲကဲ….. ကျမကိုအင်္ကျီဝတ်နေတုန်းလှမ်းဖက်လိုက်တဲ့ဦးထွန်းအေးဟာ ကျမရုန်းကန်လိုက်တာကြောင့်နောက်ကိုဆုတ်သွားပါတယ်..။ကျမရဲ့အသားကို ထိလိုက်ရလို့လားမသိဘူး..။သူ့လီးကြီးကအပေါ်ကိုနဲနဲတက်လာသလိုပါပဲ..။
ဒီမှာတင်တင် ….ငါ့ကိုအလိုမလိုက်ဘူးဆိုရင်နင်နဲ့အောင်မောင်းတို့သားအဖ ဖြစ်ကြတာတွေကိုရွာထဲလျှောက်ပြောပစ်မယ်..ရှင်… ဦးထွန်းအေးကျမရဲ့အညှာကိုကိုင်လိုက်ပါပြီ…။ဒါတော့မဖြစ်ပါ..။ တစ်ရွာလုံးက ယောက်ျားတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်လိုးတာကျမခံရပါစေ..။ကိစ္စမရှိပါ..။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဖြစ်တာကိုပဲလူသိသွားမှာကျမအလွန်ကြောက်လှပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်ကျမကလဲဘယ်ခေပါ့မလဲ“ဒါဆိုဘကြီးနဲ့ကျမအပေးအယူတစ်ခုလုပ်မယ်…“အေး….ပြော….“ ကျမကမပြောသေးပဲကိုယ်ပေါ်ကအဝတ်အစားတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်..။ ပြီးမှ.. ..ဘကြီးအလိုကိုကျမလိုက်မယ်…ဒါပေမယ့်ဘကြီးကဘကြီးရဲ့မိန်းမဒေါ်ထွေးကိုဒီကို ဘယ်တော့မှမလာစေရဘူးလို့ကတိပေးရမယ်….ဟဲ..ဟဲ…တင်တင်ကအစ်ကိုကြီးကိုတစ်ဦးတည်းမူပိုင်လိုချင်တာကိုး….ဟဲဟဲ…စကားမများနဲ့ထင်ချင်သလိုထင်..ကျမပြောတာသဘောတူလား…..။
တူပါတယ်…တူပါတယ်…မထွေးဒီကိုဘယ်တော့မှမလာစေရပါဘူး……ကဲလာ… ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွင်းဖက်ခန်းထဲရောက်သွားကြပါတယ်..။ဦးထွန်းအေးက သူဝတ်ထားတဲ့စွပ်ကျယ်ကိုချွတ်လိုက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ပေါ့…။ “ဘကြီးတော့အမောမခံနိုင်တော့အပေါ်ကနေလုပ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး….“ “ရတယ်…ဘကြီးပက်လက်လှန်လိုက်….“ အဘိုးကြီးပက်လက်လှန်လိုက်တာနဲ့ကျမကသူ့ခါးနားမှာထိုင်ပြီး သူ့လီးကြီးကိုလက်ဝါးလေးနဲ့အသာဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်..။လီးကတောင်နေပေမယ့်သိပ်ပြီး မမာသေးပါဘူး..။ဒါကြောင့်ကျမကလီးကိုရှေ့တိုးနောက်ငင်နဲ့တစ်ချက်ချင်း ဂွင်းတိုက်ပေးပါတယ်..။အဘိုးကြီးကလည်းကျမရဲ့နို့နှစ်လုံးကိုအမျိုးမျိုးကိုင်ပြီး ဆုတ်နယ်နေရုံမျှမကထိုင်နေတဲ့ကျမရဲ့ပေါင်ကြားကိုပါသူ့လက်ကလှမ်းလာပြီး စောက်ပတ်လေးကိုပွတ်လာတော့ကျမကဖင်ကြွပြီးဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ပေးလိုက်ရပါတယ်..။
ဒီတော့စောက်စေ့လေးပွတ်လိုက်စောက်ခေါင်းထဲလက်ညှိုးနဲ့ တဖတ်ဖတ်ထိုးလိုက်နဲ့ကျမကလည်းလီးကြီးကိုဆုတ်ပြီးပွတ်ပေးနေတော့ကျမရဲ့ စိတ်တွေဟာလည်းထလာပါတော့တယ်..။ ခဏကြာတော့သူ့လီးကြီးလဲအတော်မာလာပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျမဟာသူ့အပေါ်ခွတက်ပြီး လီးကိုစောက်ပတ်ဝမှာတေ့ပြီးထိုင်ချလိုက်ပါတယ်..။ပြီးတော့ဖင်ကိုကြွကြွပြီး တစ်ချက်ချင်းလိုးပေးနေရာကကျမစိတ်တွေထလာတာကြောင့်ခပ်နာနာ ဆောင့်လိုက်ပါတယ်…။ “အင်း…ကျွတ်..ကျွတ်….ကောင်းလှချည်လား…ကွယ်…ဘယ်လိုများလုပ်လိုက်တာပါလိမ့်….“ ပြောရင်းအောက်ကနေကော့ကော့ပေးတယ်..။ကျမကလည်းကိုယ်ကိုရှေ့သို့အနည်းငယ် ကိုင်းလိုက်ရာကသူ့ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုမြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ပြီးကျမရဲ့ဖင်ကြီးကို သူ့လီးကျွတ်ထွက်သွားမတတ်မြှောက်မြှောက်ပြီးစောစောကထက်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချတယ်..။ “အမလေး…သေရောပေါ့…ဖြေးဖြေးလုပ်စမ်းပါ…“။
ပြောရင်းသူ့လက်နှစ်ဖက်ကလည်းကျမနို့နှစ်လုံးကိုဆုပ်နယ်ပေးနေပါတယ်..။ကျမလည်း ဆောင့်နေရင်းကမောလာတာနဲ့လီးတစ်ချောင်းလုံးကိုစောက်ပတ်ထဲသွင်းပြီးသူ့ဆီးခုံနဲ့ ကျမစောက်ပတ်ဝကိုဖိကပ်ပြီးခဏနားနေလိုက်ရာအဆောင့်ရပ်သွားလို့အောက်က အဘိုးကြီးဆန့်တငံ့ငံ့ဖြစ်သွားတယ်..။ဆောင့်စမ်းပါ….တင်တင်ရာ….ဒါနဲ့စောစောကတော့သေရောပေါ့ဆို…ဒါကတော့တင်တင်ကကြမ်းလွန်းလို့အစ်ကိုကြီးမခံသာလို့ပါ..၊ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့လီးကို အဆုံးထိဝင်သွားအောင်သာချပါ…ကျမလည်းအမောပြေတာနဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းလေးလေးမှန်မှန်နဲ့တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ပေးပါတယ်..။ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့အားမလိုအားမရဖြစ်လာပုံရတဲ့။
ဦးထွန်းအေးဟာကျမခါးကိုကိုင်လိုက်ပြီးသူကအောက်ကနေပင့်ပင့်ပြီးဆောင့်ပါတယ်..။လုပ်…လုပ်.နာနာသာလုပ်…..အဘိုးကြီးအသက်ရှူသံတွေတဟဲဟဲဖြစ်လာတယ်..။ကျမလည်းစိတ်တွေသိပ်ထနေပြီး အားမရနိုင်တော့ပါဘူး..။ဒါကြောင့်စိတ်ပါလက်ပါပဲခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးပါတော့တယ်..။ ဒီလိုလိုးရင်းကသူ့လီးကိုစောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုနဲ့ညှပ်ညှပ်ဆွဲလိုက်တော့သူက ကော့ကော့တက်လာပြီး… “ဆောင့်ဆောင့်…မြန်မြန်…အစ်ကိုကြီး..ပြီးကာနီးပြီ……ကျမကိုယ်တိုင်လည်းပြီးချင်နေပြီမို့ခပ်ပြင်းပြင်း၁၀ချက်လောက်ဆောင့်လိုက်တော့ သူ့သုတ်ရေတွေပန်းဝင်လာခိုက်မှာပဲကျမလည်းတစ်ချီပြီးသွားကာသူ့အပေါ်ကို မှောက်ကျသွားရပါတော့တယ်….ရှင်…..ပြီးပါပြီ။
ကြုံ တုန်း ဆုံ တုန်း